बुधबारको राशीफल : लगानी, धनआर्जन, स्वास्थ्य, यात्रा, अध्ययन, प्रेम र परिवारमा कस्तो योग छ ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
बुधबारको राशीफल : लगानी, धनआर्जन, स्वास्थ्य, यात्रा, अध्ययन, प्रेम र परिवारमा कस्तो योग छ ? हेर्नुस्
वि.सं. २०७६ श्रावण २९ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अगस्ट १४ तारिख,
श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, उत्तराषाढा नक्षत्र, मकर राशिको चन्द्रमा, आयुष्मान् योग, वणिज र विष्टि (भद्रा) करण ।
अवसरको योग छ । अरुलाई दिएको वचन पूरा गर्न दौडधूपप गर्नुपर्नेछ । पुरानो समस्या समाधान गर्न घरायासी भौतिक सामाग्री बनाउनु पर्ला । ऋणभार बढ्न सक्छ । नयाँ काममा शुरु गर्दा अनुभवीको सल्लाह लिनुहोला । योजना गोप्य राखेर काम गर्नु फाइदा हुनेछ ।
कामको अवसर मिले पनि प्रतिफल पाउन गाह्रो छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापार व्यवसाय सामान्य छ ।
भाग्योन्नतीको समय छ । एउटै कामले दोहोरो फाइदा दिलाउनेछ । दिर्घकालिन योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । सामाजिक र परोपकारी काममा मन जानेछ ।
व्यवसायिक वा पेसागत काममा सफलता मिल्नेछ । आश मारेको काम बन्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट राम्रै लाभ पाइएला । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत सफल भइएला । प्रतिस्पर्धामा विजयी हुने योग छ ।
मनमा निराशा र भय हुनसक्छ । आत्मबल र हिम्मतले काम गर्नु राम्रो हुन्छ । सामाजिक र पारमार्थिक काम गर्न मन लाग्नेछ ।
नयाँ कामको जिम्मेवारी आउला । चुनौतीको बावजुद पनि गरेको काममा सकारात्मक फल पाइनेछ । अप्रत्याशित उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । प्रविधिसँग सम्बद्ध उपकरणमा समस्या आउँदा महत्वपूर्ण काम नबन्न सक्छ ।
समय मनोरञ्जनपूण रहेको छ । यात्राको अवसर आउनेछ । परिवारको सहयोग पाइनुका साथै प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ । जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ ।
व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । आम्दानी प्रशस्त बढ्नेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । परिश्रमले अरुलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । साझेदारीको कामबाट फाइदा मिल्नेछ ।
मिश्रित फल फल प्राप्त हुने समय छ । रकम र भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम शुरु गर्न सकिनेछ । कामको चापबाट फुर्सद पाइएला । विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुनेछ ।
समय चुनौतीपूर्ण भए पनि आत्मबल र हिम्मतको साथ काम गर्दा फाइदा हुनेछ । घरको जेष्ठ सदस्यको आशिर्वाद लिएर काम गर्दा सफलता मिल्ने सक्छ ।
बुद्धिको उपयोगले काम हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा प्रशस्तै फाइदा मिल्ने देखिन्छ । दिगो फाइदा हुने काम शुरु गर्दा राम्रो हुनेछ । प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर आम्दानी बढाउने अवसर पाइनेछ ।
बौद्धिक कामबाट धनलाभ हुनेछ । इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै आजको दिनमा चिताएको काम पूरा हुने योग छ ।
पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ । दिगो फाइदाको योजना बनाएर काम गर्दा लाभ मिल्नेछ । मान्यजनको सुझावले फाइदा दिलाउनेछ । कृषि, पशुधन र अचल सम्पत्तिको उपयोग हुनसक्छ ।
कमजोरी सुधारेर काम गर्दा महत्वांक्षी योजना सफल हुनसक्छ । हडबडमा काम गर्दा विग्रन सक्छ । सचेत हुनुहोला । बौद्धिक क्षेत्रमा समेत प्रगति हुने समय छ ।
मिश्रित फल प्राप्त हुने समय छ । आज सबैसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला । आफन्तहरु टाढिने र काम विग्रने डरले सताउनेछ । सोचेको काम गर्दा सोचेजस्तो सफलता नमिल्न सक्छ । सहयोगीहरुको भावना बुझ्न नस्कदा समस्या आउन सक्छ ।
सञ्चित धन खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । कृषि तथा पशुपालनमा लगानी बढ्न सक्छ । पारिवारिक असमझदारीले अप्ठ्यारोमा परिएला । मिहेनत गर्दा समय फलदायी हुनसक्छ ।
धनवृद्धिका लागि आज गरिएका प्रयास सफल हुनेछ । सहयोगीहरुको भावना बुझ्ने कोशिस गर्नुहोला । सहयोग र उपहारको आशा गरेमा निराश भइनेछ । इष्टमित्र र परिवारको सहयोग पाइनेछ ।
मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न धनको बाधा हुनसक्छ नयाँ काम शुरु गर्दा दौडधूप गर्नुपर्ला । व्यापार र कृषिमा फाइदा हुने समय छ । ढिलो गरी काममा सफलता मिल्नेछ । एउटै कामलाई दोहोर्याएर गर्नुपर्ने परिस्थिती बन्न सक्छ ।
मिहिनेत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ । हिम्मतले काम बनाउने समय छ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्छ । दिर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
उपलब्धिले थप उत्साह जगाउनेछ । बोलीको भरमा काम बन्नेछ । तार्किक क्षमताले मानसम्मान दिलाउनेछ । विगतको सफलताले हौसला मिल्नेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउने ।
साथ र हिम्मत दिनेहरु प्रशस्तै भेटिनेछ । लगनशील भएमा आजको दिनमा प्रशस्तै धन लाभ हुने देखिन्छ ।
धेरै आशावादी नभई लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ काम गर्दा उपलब्धि हासिल हुने समय छ । आम्दानीमा केहि असहजता देखिए पनि मिहनेत गर्दा आजको आर्थिक संकटको निवारण हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धी र शत्रु सक्रिय हुन सक्छन् । यसकारण आज आँटेको र तोकेको काममा गोपनीयता राख्नु राम्रो हुनेछ ।
श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । गरेका कामबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै लाभ पाइएला । लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नेछ । आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ । साझेदारीमा गरिएको काममा फाइदा छ ।
श्रमको मूल्यांकन हुने र नयाँ जिम्मेवारी हात लाग्ने समय छ । पैत्रिक धनको उपयोगबाट विशेष लाभ मिल्नेछ । विभिन्न भौतिक साधनहरु जुट्नेछन् । आम्दानी बढ्नेछ । दिगो फाइदाको लागि लगानी बढाउने समय छ । परिवार प्रशन्न रहनेछ ।